“Sida uu magaca Wasaaradda u Khalday, ayuu magaca xilkiisana u Khalday Wasiirka Khaarajiyada Somaliland” Muwaadin Maxamed Haaruun Oo Soo Bandhigay Warqada Loo Qoray William Hague – Araweelo News Network (Archive)
“Sida uu magaca Wasaaradda u Khalday, ayuu magaca xilkiisana u Khalday Wasiirka Khaarajiyada Somaliland” Muwaadin Maxamed Haaruun Oo Soo Bandhigay Warqada Loo Qoray William Hague
Fariimo email u badan baa I soo gaadhay tan iyo 13 kii bishan February, 2013, oo ahayd goortii aan Madaxwaynaha Somaliland, Mudane Axmed Maxamed Maxamuud (Silanyo) hortiisa ka akhriyay qaybo ka mid ah waraaq foolxun oo Wasiirka Khaarajigu
uu Bulshada Caalamka, gaar ahaan Ingiriiska u qoray saddex ayaamood kadib digniintii amniga ee January 27, 2013 London ka soo yeedhay. Fariimahaasi I soo gaadhaayay in badan oo ka mid ahi waxay iga soo codsadeen in aan waraaqdaas aan shirka madaxwaynaha ka sheegay, war dheeraad ah ka siiyo, ama la wadaagoba. Sidaas darted, waxan qormadan kaga jawaabayaa dalabyadaas tirada badan ee I soo gaadhay. waraaqdii oo sideedii u qoran, iyo faahfaahin aan ka horaysiin doono, si aan tooshka ugu ifiyo meelaha ay cambaarta ku leedahay ba iga hooya.
Intaas horteed, xikmad Soomaaliyeed baa ahaan jirtay: “Aqalkaaga hortiisa, ood baa la dhigtaa, ereygaaga hortiisna, afeef baa la dhigtaa.” Waxan akhristayasha ku leeyahay, wax aad ogtihiin ma idiin sheegaa? Dadka qaarkiis baa igu yidhi, maxaad dawladda dhan hal qof, iyo hal wasaarad uun uga hadlaysaa? Qaar kalena, sida aan mareegaha wararka (websites) ka akhriyay, hoos bay u sii dhaadhaceen, waxaanay ka kaluumaysteen laabtayda. Waxay ku doodeen inay maskaxdayda shabaadhka geeyeen, waxaanay ka heleen, siday sheegeen, cudur la yidhaaho shakhsi nacayb iyo xumaan kaleba. Ninba ceesaantii ceel keen! Saw lama odhan jirin? Waxan tilmaami lahaa, dhengagaaluhu goor kastaba waa iska joogaaye, sababta aan Wasiirka Khaarajiga, iyo Wasaaradda uu joogo uga hadlayaa inay tahay: anigoo daneeya mawduuca siyaasadda debedda, waxna ka bartay cilaaqaadka caalamiga ah, aqoonsiga la sheego ee Somaliland suurtagalnimadiisa baadhitaan heer jaamacadeed ah ku sameeyay, anigoo dhawaan uun ka hor ahaan jiray Xog-hayaha Khaarajiga ee Xisbiga Ucid oo shaqadayduba ahayd u fiirsiga iyo dabagalka Wasaaradda Khaarajiga, iyo midda intaas oo dhan kaba wada muhiimsan, qof kastana saaran oo ah “Xilkii gubi jiray qof noolba”, waa halkii Abwaan C/laahi Abwaan Xassan Ganaye.
Qofkii isagu waxyaabo kale wax ka fahamsani, ha ka hadlo qaybaha kale, laakiin aniga taas igu ogaada, hana yaabina hadaan idhaaho wax baa qaldan. Hadii aanay waxba qaldanayn, taas baa ugu sahlan oo aniga oo kaliya ayaa qaldan, hadayse wax qaldanyihiin, oo badankiinu ama dhamaantiin aad wada aragtaan, ma shakhsi caabud iyo wax ka liita ayaynu uga aamusnaa? Koleyba aniga maya bay ila tahay. Wasiirka Khaarajiga iyo ku xigeenkiisaba waan ka hadlayaa, maxaa yeelay Wasaaraddii baan ka hadlayaa, dhaliil waynna waan u hayaa, qofkii daafacayaana waxan ka codsanayaa inuu si miyir qabta, oo waxyaabaha liita ee shakhsi nacaybka la sheego, iyo xaafadaha loo duwo aragtida wanaagsan iyo toosinta si ka saraysa u hadlo. Haddii aanay xilal haynin, qofkii ka hadlaa isagaa waalan, hadayse xilal hayaan, oo shaqaale inoo yihiin, oo mushaharkooda aynu bixino, waa inaan markay toosanyihiin ku amaanaa, kolkay weecdaana, ku dhaliilnaa. Laakiin iyaku (siyaasiyiintu) midda hore uun bay rabaan. Dhaliisha aan sheegaayo, oo Wasaaradda iyo Wasiirkaba fuushan, waraaqdan aan hada faaladeeda u fadhino ayaa ka mid ah ee ila wadaaga.
Waraaqdu ma dheera, laakiin qormo kaamil ah (complete essay) bay rabtaa in laga qoro si loo faaleeyo qaladkeeda. Waxan ku dadaali inaan soo koobo. Waraaqdii hoosta ayay taalaa, meelaha dhaliisha xuni ka muuqatona, far waawayn baan ka dhigay oo si sahlan loo dareemi karo.
U fiirso sadexda meelood ee aan lambaradda 1, 2 iyo 3 kala siiyay oo ah meelaha ugu liita ee fariintan dalabta u yeelay. Dhawrka meeloodba turjumaad iyo faalo kooban baan raacin doonaa.
Haddii aad Madaxii Diblomaasiyada tahay, oo Wasaarad dhan iyo qaran dhan war khuseeya sii daynayso, ereyo isku jira (ambiguous words) waa inaad qoraalka ka dhawrto. Badiyaa kolka baaq (statement) ama qoraal rasmi ah la soo saaraayo, dhawr goor baa horey iyo dib ba loo eegaa, dad kala duwan oo isla Wasaaradda uun ah na way soo martaa, laakiin inaka hal qof oo ah Wasiirka wax ka sokeeya, iyo wax ka shisheeya toona ma marto. Waa Wasaarad qof kaliya uun ka kooban.
Waa Wasaarad aan qorshe hawleed (strategy) lahayn oo noqotay baabuur bilaa isteerin ah, oo hadana socda. Waa halkaas meesha ay ibtiladu ka taagantahay, wax badanina ku xumaanayaan, ama kuba xumaadeenba. Aniga malahayga, Xog-hayaha Arimaha Debedda ee UK, William Hague, oo fariintu toos ugu socotay, iyo Wasiir kasta oo caalamka kale ah, oo waraaqdaas la hor dhigaa judhiiba si sahlan buu u qiyaasi karaa qofka soo qoray tamartiisu inta ay leegtahay. Xataa qiyaas aan sax ahayn baa looga qaadan karaa guud ahaanba umadda uu matalaayo kartideeda. In lagu qoslo, oo ka dib na, dhinac la isaga leexiyo ayay u badantahay, waa hadiiba ay gaadhay cidii ay ku socotay. Waraaqdan kaligeed ayaa ina tusaysa xaaladda ay Wasaaradda Khaarajiga ee Somaliland ku sugantahay, waana in duruus laga barto.